ခရစ္စတီးနားခီရဲ့မွေးနေ့မှာ တစ်ချိန်တုန်းက ဆိုက်ကိုသုံးပြီး သူ့အချစ်ကိုရယူခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးကို မျှဝေလာတဲ့ ဇဏ်ခီ - Cele Gabar
ခရစ္စတီးနားခီရဲ့မွေးနေ့မှာ တစ်ချိန်တုန်းက ဆိုက်ကိုသုံးပြီး သူ့အချစ်ကိုရယူခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးကို မျှဝေလာတဲ့ ဇဏ်ခီ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်တွေအတွက် အပြောင်းအလဲတွေယူဆောင်လာပေးခဲ့တဲ့ ခီတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကတော့ လေးစားအားကျစရာ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မပြောင်းလဲ မပျက်ပြယ်တဲ့အချစ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေမို့ ပရိသတ်တွေ လေးစားအားကျနေရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲလေးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဒီနေ့ အောက်တိုဘာ(၁၈) ရက်နေ့လေးကတော့ ခရစ္စတီးနားခီရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပါ။
ဇဏ်ခီကတော့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဆုတောင်းပေးရင်း တချိန်တုန်းက ချစ်သူဘဝမရောက်သေးခင်တုန်းက အမှတ်တရတချို့ကို မျှဝေပေးလာပါတယ်။ ကျနော်တို့ကြိုက်တော့မလိုလို အီစီကလီ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဈေးဘန်းခင်းနေတဲ့ကာလတုန်းကပေါ့လေ.. စိတ်ဝင်စားသူတွေလည်းအများအပြားကြားမှာ မသေမချာမရေမရာဖြစ်နေတုန်းကာလ.. ကျနော်ဇဏ်ခီရဲ့အကွက်တကွက်.. ကျနော့်မွေးနေ့မှာသူ့ဆီကိုသွားပြီး သူ့ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ သူကြောင်သွားပြီး..- ဟမ် ဒါကဘာအတွက်လဲ.. ကျနော် – မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါ…. Chris – Chris မွေးနေ့ကလိုသေးတယ်… ကျနော် – ကျနော်သိပါတယ်.. ဒီနေ့ကကျနော့်မွေးနေ့လေ.. ဆိုတော့သူကြောင်ကြည့်နေတယ်.. သူအူကြောင်ကြောင်နဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုယူလိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် သူမသိလိုက်တာက ကျနော် reverse psychology သုံးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုပါ။ သူ့မွေးနေ့မှာတောင် ငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ ဆိုတဲ့ impression ကြီးကသူ့စိတ်ရဲ့အနောက်ပေါက်ကနေဝင်သွားပြီး မိန်းမတို့ရဲ့မာနဆိုတဲ့အစိုင်အခဲကြီးကို မီးရှို့ဖျက်စီးလိုက်ပြီဆိုတာကိုပါ.. ဆိုပြီး ခရစ်ရဲ့ ဆိုက်ကိုသုံးပြီး ခရစ်ရဲ့စိတ်ကို အပိုင်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ သူဟာ ကျနော့်ကိုဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပေးရ..ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ပေးရ..bow tie တွေစီးပေးရ..ဟင်းတွေချက်ပေးရ..ထီးတွေလိုက်မိုးပေးနေရပြီပေါ့လေ..ဟဲဟဲ …Happy Birthday my love! မွေးနေ့မှာစိတ်မဆိုးကောင်းဘူးနော် ဆိုပြီးတော့လည်း အရွှန်းဖောက်ကာ ချစ်ဇနီးလေးကို စခဲ့ပါသေးတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဇဏ်ခီကတော့ ခရစ်ရဲ့အချစ်ကိုရဖို့ သူသုံးခဲ့တဲ့နည်းလမ်းကောင်းလေးကို မျှဝေပေးခဲ့တာမို့ ပရိသတ်ကြီးထဲမှာလည်း ကောင်မလေးအချစ်ကိုရဖို့ ခက်နေတဲ့သူတွေရှိရင်လည်း ဒီနည်းလမ်းလေးကို သုံးကြည့်လို့ ရပါတယ်နော်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စံပြဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာခရစ္စတီးနားခီလည်း ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေအပြည့်နဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆယ်လီကမ္ဘာမှ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
လာဗင်ဒါပန်းခင်းကြီးကို အရမ်းကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို မျှဝေလာတဲ့ မိုးဟေကို